Motorcycle M-72 kwesikhathi iSoviet izinto eziningi ezinkulu, kusukela ngo-1940 kuya ku-1960 ngesikhathi izitshalo eziningana. Kwaba ekhatsi Kiev (CMH), Leningrad ifektri "Red Okthoba", emzini Gorky (GMZ) Irbit (IMZ), efektri isithuthuthu eMoscow (MMZ). Ekuqaleni ngesithuthuthu esindayo M-72 Yenziwa kuphela ukudiliva ukuba amabutho ahlomile. Umshini ifakwe ukukhanya machine gun, okwakubekelwa ogibele phambi stroller. I ibhayisikili engafiki emkhakheni civil ukuhweba, futhi uma umuntu has a "phezulu" ku-M-72, sathula, futhi umshini sikhethwe ngaphandle incazelo.
Motorcycle M-72 waba kuhlukaniswe nge nokusetshenziswa kwegama elithi "zempi", nakuba wayengabhekiseli armored. Igoqiwe ku-esinenjini ibutho amayunithi futhi kwaba imoto base elihamba lwa olelezekileyo. eziwumnqamula-juqu kweMpi Yezwe II akazange abe ngesithuthuthu, ngoba ubengahambisani evikelwe emagobolondweni isitha kanye izinhlamvu. Kwanele for isinqamu elincane okwami ukungena injini futhi wayeka, amasosha wasala engasenabo ikhava futhi wafa. ukusetshenziswa ngempumelelo M-72 kwenzeka uma lahlasela, ngaphansi kwesimo ukumangala lapho isitha bedidekile futhi abakwazi ukumelana.
I-prototype ye-M-72 kwaba ngesithuthuthu German BMW R71, imodeli ezivame kakhulu kuleli izakhiwo Wehrmacht. Five yalezi izithuthuthu zazishushumbiselwa uthenge eSweden, uyiswa eMoscow, yawa, wahlola. Ngo-March 1941 eMoscow isithuthuthu yayiqala ukukhiqizwa version Russian. isithuthuthu Soviet Kwatholakala akukho okubi kakhulu ukwedlula umlingani wakhe isiJalimane, nakuba umshini umhlangano line waya njalo. Izingxenye eziyisisekelo futhi izingxenye isithuthuthu ekhiqizwa Izimboni ezahlukene: injini kwenza efektri imoto yaqanjwa Stalin, gearbox - ku AZLK (Lenin Komsomol Plant), stroller kanye umphini ekhiqizwa ngesikhathi Gaz emzini Gorky. Ngakho, ekuqaleni, ukukhululwa M-72 ngesithuthuthu kuhlelwe wawuphazanyiswa ukungalandelani abahlinzeki.
Phakathi nempi, ngesithuthuthu M-72 yadalwa ngezinsuku izitshalo ise-anthrax ukuthuthwa kwabantu ngenxa yengozi zone. Labe ukungezwa igama Inkomba "Ural". Lapho impi iphela, iSoviet Union bekulokhu boom ukuthekelisa, uhulumeni ezama ukuthola imali eningi ngokudayisa izimpahla phesheya. M-72, isithuthuthu Soviet akhishelwe khona iminyaka engu-50 emazweni angaphandle in inqwaba. M-72 "Ural" ngokuzithandela wathenga eYurophu. Design Simple nokwethembeka bebelokhu agumenti main esivuna imodeli.
Kusukela ngo-1955 isithuthuthu "Ural" M-72 waqala ukuthengisa kuya labantu kuleli zwe. okufushane Yomphakathi kwahluka injini ethuthukisiwe, uzimele oqinile, torque okuxhunyanwa injini Ukujikeleza ukuba ukuthutha isondo. Ethangini gas ngesikhathi ehlotshisiwe okudweba nombhalo othi "Irbit". Ngegama izimoto ngamabhayisikili anamasondo amathathu babebhekwa njengabangakufanelekeli lingelakhe zabanikazi, kodwa kuphela nenkathi yokuthula. Endabeni ka impi, isithuthuthu ngamunye "Ural" M-72 babengase requisitioned futhi bathunyelwa epini.
Umklamo we-M-72 kungahlali kahle ku elihambayo inhlangano inqubo, okwenza bakwazi ukukhulula inqwaba imishini esikhathini esifushane yesikhathi. ukukhiqizwa Motorcycle yaphela isifiso abaklami yokuthuthukisa nemingcele lobuchwepheshe etindlela ngabanye. isithuthuthu German BMW R21 iqukethe eziningi emisha technical ezingazange kufakwe inqubo esasetshenziswa emhlanganweni version Soviet. Ngakho-ke, onjiniyela wafuna uhambisane bafakwa ukukhiqizwa yonke impumelelo ewusizo wezazi-German.
Isinyathelo esilandelayo kwaba ukuthuthukiswa design: Uhlaka Duplex, kabili igiya shift - a isigwedlo-eziqhutshwa, futhi (ngesithuthuthu ngokuzikhethela), entwasahlobo dampers ukumiswa ezingemuva, le telescopic phambi isakhiwo ekuphambukeni. Esikhundleni ukudluliswa uchungechunge isici isithuthuthu Soviet driveline aqine. ngokuhlukana Kwenziwe kwamandla amasilinda, kulesi simo usungula ezimbili isithuthuthu carburetor.
Abobulili ilungiselelo isilinda ukunikeza ukulinganisela ezinhle motor lihambisana isikhungo ongaphakeme adonsela phansi, esemgwaqweni ezingeni ukuphakama 592 mm. izingxenye Asizayo - generator, futha uwoyela, timer - uphendukisa nge ngemoto igiya. Sakaza yensimbi amasilinda zambozwa upende okhethekile black ezinezici ukushisa ukumelana. crankshaft Bomdabu abasebenze inaliti amabombo. Ama-rod yokuxhuma zazihlukaniswe futhi wahlala elowo ngasentanyeni yakhe crank. Lokhu kwakuhilela ovundlile Axial displacement we amasilinda e ukubaluleka 39.2 mm isihlobo komunye nomunye. crankshaft isibili kunganciphisa ubude crankcase ngenxa thinning (18 mm) phakathi ezihlathini futhi crankpins.
Esikhathini isithuthuthu M-72 e samuntu civil namanje esungulwe cell Spares kanye nezinhlamvu, kanye idivayisi swivel ngomshini RPD uhlelo isibhamu. Kulokhu, umnikazi omusha babengenalungelo ahlukanisa kubakaki ibutho. M-72 - isithuthuthu, okuyinto uthumele isithombe ekhasini - iyisibonelo esivelele of nenkathi yamaSoviet.
Kusukela ngo-1956 Irbit Motor Plant esitshalweni kukhombisa M-72M, okuyinto babengafani izithuthukisi ambalwa adlule. Brake izigubhu abangu iyakhula akwazi ukugcina ekhethekile wanyathela, ekuthuthukiseni spokes obandayo ezahlukene elikhulu ezingemuva iphiko indawo zokuhlanzwa iyashelela kusuka ukungcola yayo okunamathelayo. iphiko Front waphakamisa futhi eqondiswa ingxenye elimisiwe ngaphambili ekuphambukeni. Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo washintsha ukumisa yayo.
Inkinga M-72M akuzange kuhlale isikhathi eside, "IMZ" ngokushesha kwi-ukukhiqizwa imodeli M-61. Ngaphezu izithuthuthu ejwayelekile, lesi sitshalo e Irbite athuthukile ezemidlalo ukuguqulwa M-72k, ukwakhiwa engasindi, nge umthamo injini 30 amalitha. s., ifakwe idivayisi ngokushintsha isikhathi valve.
M-72k, senzelwe Motocross izinhlanga, bephethe imbobo ekhethekile, kuthatha emoyeni mass kusuka phezulu iphaneli tank umthamo. Motorcycle Wheel "izicathulo" e isondo nge ngokujulile yimpandla iphethini. I headlight isusiwe, isisindo ingqikithi kuyehla ohlangothini ukukhanya we-trailer.
Motorcycle M-72, izingxenye ezisele
ESoviet Union, ngenxa emnothweni lohleliwe, ukukhiqizwa izingxenye ezisele uvusiwe ezingeni eliphezulu kakhulu. Kukholakala ukuthi izindlela lobuchwepheshe kufanele yibhange ukunikeza ukulungisa izindawo. Ngakho-ke, thina usethe yokusungula, okuyinto iminyaka kubutsela uthuli emafektri. Njengazo zonke izithuthuthu nenkathi yamaSoviet, iM-72 wanikezwa izingxenye ezisele for Emashumini eminyaka alandela. Okwamanje, ukuntuleka kit isithuthuthu esindayo seMpi yoMhlaba yesiBili khona.
Motorcycle M-72, intengo
Okwamanje emakethe izimoto lesibili ngesandla eningi okunikezwayo. Iyathinteka kanye M-72 "Ural". Kukhona ngisho izimo ezingavamile - izithuthuthu Retro ukukhulula ngo-1957. Izindleko incike isimo sabo - uma nje imoto ezintathu ezinamasondo egqwalile, kungaba malini ama-ruble ayizigidi 10. Kodwa uma ibhayisikili isidlulile yokusiza umuntu ukuba aphefumule lobuchwepheshe ibuyiselwe ubuchwepheshe ezifanele, ine isethulo lihle, leli nani kungenzeka ukwandisa ukuba ama-ruble ayizigidi 399, njengoba akuyona isithuthuthu, kanye Retro okukhethekile.
Yini ebamba isihlalo isithuthuthu
Kusukela okubonakala tartar? Izimbangela kumiswa itshe